> Resource> iPhone> Olee otú iji Ịmata Ọdịiche iPhone 4 si iPhone 4S
Eme m nwere ihe iPhone 4 ma ọ bụ iPhone 4S? Ụfọdụ ọrụ nwere ike amaghị ihe nlereanya nke ha iPhones, n'ihi na ha nwere ike inwe ha dị ka onyinye, ma ọ bụ ha nke zụtara ha si a abụọ n'aka. Mgbe ahụ, olee otú ị ịmata ọdịiche iPhone 4 si iPhone 4S? E nwere ụfọdụ aghụghọ.
Mgbe e nwere ndị mba nnukwu iche n'etiti ngwaọrụ abụọ. The iche nke ngwaike ka ọwọrọiso ka ị pụrụ ịhụ na-esonụ oyiyi.
Jiri iPhone Inweta Panoramic Photo